किन सधैं क्याप लगाउँछन् नवीन के भट्टराई ? – Khabar Silo
किन सधैं क्याप लगाउँछन् नवीन के भट्टराई ?
धेरै पहिले सोचेको कुरा सम्झाइदिनुभयो । क्यापबारे एउटा गीत बनाउँछु भनेर धेरैपहिले सोचेको थिएँ, पछि बिर्सिएछु क्यारे । गितारबारे एउटा गीत लेखेको छु, तर क्यापबारे छैन । जे होस्, कुनै दिन लेख्नेछु ।